The Defender's Protocol is now available in Burmese / ကာကွယ်သူလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ကျင့်ဝတ် ကိုမြန်မာဘာသာဖြင့်ရရှိနိုင်သည် - Open Briefing
Home > Blog > The Defender’s Protocol is now available in Burmese / ကာကွယ်သူလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ကျင့်ဝတ် ကိုမြန်မာဘာသာဖြင့်ရရှိနိုင်သည်
There is an urgent need for concise and effective security resources to support targeted pro-democracy activists and journalists in Myanmar. In response, Open Briefing has published its Holistic Security Protocol for Human Rights Defenders in Burmese.
Now available in 22 languages, the Defender’s Protocol helps civic actors at risk advance their physical safety, digital security, and wellbeing and resilience. It is based on our experiences working with civic actors all over the world, including those in closed civic spaces and violent and insecure environments. By following the measures in the Protocol, activists and journalists in Myanmar and elsewhere can enhance their individual and collective security, and reduce the burden of attacks, harassment, and censorship on them and their communities.
The Defender’s Protocol is accompanied byaHolistic Security Handbook and an infographic. The Handbook offers extensive guidance notes, exercises, and templates to help activists and journalists implement the measures in the Protocol and adapt them to their situation, work, and profile. The infographic serves as useful visual summary of the Protocol. All are now available in Burmese.
ရည်ရွယ်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒီမိုကရေစီ လိုလားသော တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် ဂျာနယ်လစ်များကို အားပေးကူညီရန် ကျစ်လျစ် ထိရောက်သော ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အရင်းအမြစ်များအတွက် အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုရှိနေပါသည်။ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍ Open Briefing မှ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်သူများအတွက် ၎င်း၏ အလုံးစုံဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
ယခုဆိုလျှင် ဘာသာစကား ၂၂ မျိုးဖြင့် ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သော ခုခံကာကွယ်ရေးသမား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် အန္တရာယ်ရှိနေသော ပါဝင်လှုပ်ရှားသူပြည်သူများအား ၎င်းတို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ ဒီဂျစ်တယ်လုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုကို မြှင့်တင်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ပိတ်ဆို့ထားသောအများပြည်သူဆိုင်ရာ နေရာများတွင် ရောက်ရှိနေသူများနှင့် အကြမ်းဖက်ပြီး လုံခြုံမှုမရှိသောနေရာများတွင် ရောက်ရှိနေသူများအပါအဝင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ပါဝင်လှုပ်ရှားသူပြည်သူများနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများအပေါ် အခြေခံထားပါသည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါ အစီအမံများကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနှင့် အခြားတစ်နေရာရာမှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် ဂျာနယ်လစ်များသည် ၎င်းတို့တစ်ဦးချင်း၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် အစုအဖွဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို တိုးမြှင့်နိုင်ပြီး တိုက်ခိုက်မှုများ၊ ထိပါးစော်ကားမှုနှင့် ၎င်းတို့အပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ ၎င်းတို့အသိုက်အဝန်းအပေါ်တွင်လည်းကောင်း စိစစ်ဖြတ်တောက်မှုတို့ကို လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ခုခံကာကွယ်ရေးသမား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အတူ အလုံးစုံဘေးကင်းလုံခြုံရေးလက်စွဲစာစောင်နှင့် ရုပ်ပြစာစောင်တစ်ခု ပါရှိပါသည်။ လက်စွဲစာစောင်သည် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် ဂျာနယ်လစ်များအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါ စီမံချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီး ၎င်းတို့၏အခြေအနေ၊ အလုပ်နှင့် ကိုယ်ရေးအချက်များကို အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲရာတွင် အကူအညီဖြစ်စေရန် ကျယ်ပြန့်သော လမ်းညွှန်ချက်မှတ်စုများ၊ လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် ရုပ်ပြပုံစံများကို ပေးပါသည်။ ရုပ်ပြစာစောင်သည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ အသုံးဝင်သော ပုံပြအကျဉ်းချုပ်အနေဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ယခုအခါ အားလုံးကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။